Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Falastiin » Dalxiiska Falastiin wuxuu lumiyey in ka badan 1 bilyan oo doolar masiibada darteed
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Wararka Falastiin • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
In kasta oo dawladda Falastiin ay fududeysay tallaabooyinkeeda taxaddarka iyo xannibaadaha ka dhanka ah coronavirus, oo u oggolaatay dhammaan waaxaha inay si caadi ah u dhaqmaan, haddana waaxda dalxiiska, gaar ahaan Beytlaxam, ayaa weli silcinaysa.
Qeybta dalxiiska ee Dhulka Falastiin ayaa sii xumaaneysa masiibada COVID-19.
Boqolkiiba 77.2 martida hudheelka ee Daanta Galbeed waa Israa’iil-Carab, 22.5 boqolkiiba muwaadiniinta Daanta Galbeed iyo 0.3 boqolkiiba oo keliya oo ka yimid martida dibadda.
Dhulka Falastiin wuxuu ka kooban yahay laba aag oo kala duwan: Daanta Galbeed (oo ay ku jirto Bariga Qudus) iyo Marinka Gaza.
Warbixin rasmi ah oo ku saabsan Maalinta Dalxiiska Adduunka ee Falastiin, oo maanta la daabacay, ayaa lagu sheegay in waaxda dalxiiska ee Falastiin ay luntay in ka badan 1 Bilyan oo Doollar tan iyo markii uu ka dillaacay cudurka Coronavirus ee dhulalka Falastiin.
Warbixinta, oo ay si wada jir ah u daabaceen Xafiiska Tirakoobka Dhexe ee Falastiin iyo wasaaradda dalxiiska iyo qadiimiga, ayaa intaas ku dartay in waxqabadka qaybta dalxiiska ee Falastiin ay sii xumaanayso COVID-19, gaar ahaan magaalada Daanta Galbeed ee Beytlaxam.
Sida lagu sheegay warbixinta, 77.2 boqolkiiba martida hoteelka ee Daanta Galbeed waa Israa’iil-Carab, 22.5 boqolkiiba muwaadiniinta Daanta Galbeed iyo 0.3 boqolkiiba oo kaliya oo ka yimid dibadda.
In kasta oo dawladda Falastiin ay fududeysay tallaabooyinkeedii taxaddarka iyo xannibaadaha ka dhanka ah coronavirus, oo u oggolaatay dhammaan waaxyaha inay si caadi ah u dhaqmaan, haddana waaxda dalxiiska, gaar ahaan Beytlaxam, ayaa weli dhibaataysan, ”ayaa lagu yiri warbixinta.
The Falastiiniyiinta Dhulalka waxay ka kooban yihiin laba aag oo kala duwan: Daanta Galbeed (oo ay ku jirto Bariga Qudus) iyo Marinka Gaza.
Dalxiiska gudaha Falastiiniyiinta Dhulalka waa dalxiiska Bariga Qudus, Daanta Galbeed, iyo Marinka Gaza. Sannadkii 2010, 4.6 milyan oo qof ayaa booqday dhulalka Falastiin, marka la barbar dhigo 2.6 milyan sannadkii 2009. Tiradaas, 2.2 milyan waxay ahaayeen dalxiisayaal ajaanib ah halka 2.7 milyan ay ahaayeen gudaha.
Saddexdii bilood ee ugu dambeysay ee 2012 in ka badan 150,000 oo marti ah ayaa degay hoteellada Daanta Galbeed; 40% waxay ahaayeen Yurub halka 9% ay ka yimaadeen Mareykanka iyo Kanada. Tilmaamaha socdaalka ee waaweyn waxay qorayaan “Daanta Galbeed ma aha meesha ugu sahlan ee lagu safri karo laakiin dadaalka si weyn ayaa loo abaalmariyaa.